တချို့မြန်မာတွေ ဘာ့ကြောင့် မြန်မာလို့ အထင်မခံချင်ကြတာလဲ - Myanmar in Singapore
Posted by Admin Team on July 18, 2010 at 10:16pm in Debate ကဏ္ဍများ
Tags: ဒါလေးတွေဖြေကြည့်ပါ Like 1 member likes this
Permalink Reply by လုလင်ပျို on July 19, 2010 at 5:01am မြန်မာစိတ်ဓါတ်မရှိလို့ပေါ့
Permalink Reply by zaw on July 19, 2010 at 8:13am somebody who has less confidence to express himself will behave such things.
If Myanmar become rich , He will say I am Myanmar.
But Everybody knows you are Myanmar and try to avoid to express your origin is more shameless in higher society.
Permalink Reply by Khine on July 19, 2010 at 8:32am ကိုယ့်အချင်းချင်းသိသွားရင် ပိုက်ဆံချေးမှာစိုးလို့နေမှာပေါ့..:P
Permalink Reply by min min! on July 19, 2010 at 8:35am ဘာဖြစ်လို့ အထင်မခံချင်ကြလဲဆို တော့.... အထင်မခံချင်လို့ပေါ့
Permalink Reply by pancherry on July 19, 2010 at 8:37am Even if someone threaten you by your throat u should borely say who you are.Don't think about some big issue just think simply that if your own children refuse to admit that your are his /her parent,how 'd you feel then?
If u want to hide your nationality don't just think about yourself do think about your parent, the blame will go to yr parent that your are not well displain by them in your childhood. In my point of view its so embarassing for yourself and your country,
if someone finds out that you are such kind of person i'm sure that they 'd look down on your attitude n they won't trust you for anything.
Everyone knows that dogs are faithful to their master ,think about that, even dogs can do that there's no point to hide who you are .So wishing all of u guys can proudly say who you are regardless of situations.LOVE YOURSLEF AND YOUR COUNTRY.
Permalink Reply by Smile Angel on July 19, 2010 at 8:22pm လူမျိုးအချို.က မြန်မာ ဆိုရင် နောက်ဆုံးမှာထားတယ် စင်ကာပူက ကျောင်းတစ်ကျောင်းဆိုရင် မြန်မာကျောင်းသားတွေ ရဲ.လျှောက်လွှာကို နောက်ဆုံးမှာကြည်.တယ် ဘာတွေမှန်း ကိုမသိဘူး
Permalink Reply by Khin Myint Hlaing on July 20, 2010 at 12:59pm ဒါကတော့ရှင်းနေတာပဲလေ..သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ တိုင်းတပါးကို အထင်ကြီးနေလို့ပေါ့။ ပြမ်မာနိုင်ငံဟာ တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် တိုးတက်မှုနှေးတာတော့ မှန်ပါတယ်၊။ ဒါမေမယ့် ရုပ်ဝတ္ထု ထက် စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ အဆင့်မြင့်မားလျက်ရှိပါသေးတယ်။
ကူညီရိုင်းပင်းမှု၊ စိတ်ကောင်းစေတနာကာငးထားရှိမှု။ ဖော်ရွေတက်မှုတွေကိုတော့ ဘယ်သူမှ လိုက်မမှီပါဘူး။ ယဉ်ကျေးတဲ့ ဓလေ့စရိုက်ကပဲ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဟေ့လို့ ကြွေးကြော်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ ။ ဒီလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံ ရှိတဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးကိုမှ မချစ်မြတ်နိုးနိုင်ဘူးရင်တော့ ဒီဘ၀မှမဟုတ်ဘူး။ နောင်ဘ၀ အဆက်ဆက်ပါ မြန်မာလူမျိုးထဲမှာ ၀င်စားမွေးဖွားခွင့် မပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ မိမိတော်၊မိမိတက်လို့ ထင်နေတာဟာ ကိုယ့်လူမျိုးလို့မှ မဖော်ပြချင်ရင်လဲ မပြန်လာကြနဲ့ တော့ တကယ်ပဲ အမျိုးဂုဏ်ဖျက်မယ့်သူတွေဟာ ဒီလိုပဲ စိတ်ဓါတ်ရှိကြတာများပါတယ်။
Permalink Reply by May Kyaw Shin on July 20, 2010 at 5:00pm ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ (ကျောင်းတော်က ရန်စ - လို.ဆိုနိုင်တဲ့ ) အရုတ္တယနဲ.မြန်မာစစ် ရှိခဲ့ကြတာမို.ဗမာဆို အတော့်ကို မုန်းနေခဲ့ကြတာလေ ။
ဒါ့ကြောင့် ဟိုး --လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေ အချိန်တွေက “ဗမာ” လို. မပြောဝံ့ခဲ့ကြတာဖြစ်မှာပါ ။ ( အခုအချိန်အထိလည်း “ အရုတ္တယ ” မြို.ထဲ
မှာ “ဗမာ” ဆို မုန်းနေကြဆဲ ဖြစ်နေပါတယ် ။ သူတို.မြို.တွေ - ဘုရားတွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့သူတွေတဲ့လေ ။ ကျမနဲ.နိးစပ်သူတွေကိုတော့ အတတ်
နိုင်ဆုံးရှင်းပြ - အဖြေပေးနေခဲ့ရပါတယ် ။ ကျမ စာ သင်ပြတဲ့ ထိုင်းတပ်မတော် ဘာသာစကား သိပ္ပံမှာ အမြဲလို ဖြေပေးနေရတာပါ ။ စစ်တပ်အရာထမ်းတွေဆိုတော့ သဘောပေါက်လွယ်ကြပါတယ် ။
ကျမတို. မိသားစုကတော့ ရောက်ကတည်းကစပြီး “ ဗမာ ” လို.ပဲ ပြောနေကြတာ ဒီကနေ.တိုင်အောင်ပါပဲ ။
ဒီလိုပါပဲ - သူ.နေရာ နဲ. သူ.အကြောင်းအမျိုးမျိုးတော့ ရှိကြမှာပါလေ ။
Permalink Reply by phyo on July 20, 2010 at 5:34pm May Kyaw Shin said:ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ (ကျောင်းတော်က ရန်စ - လို.ဆိုနိုင်တဲ့ ) အရုတ္တယနဲ.မြန်မာစစ် ရှိခဲ့ကြတာမို.ဗမာဆို အတော့်ကို မုန်းနေခဲ့ကြတာလေ ။ ဒါ့ကြောင့် ဟိုး --လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေ အချိန်တွေက “ဗမာ” လို. မပြောဝံ့ခဲ့ကြတာဖြစ်မှာပါ ။ ( အခုအချိန်အထိလည်း “ အရုတ္တယ ” မြို.ထဲ
ကျနော်နဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ ထိုင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်...သူကလည်း ငယ်ငယ်ကတည်းက ဗမာ မကောင်းကြောင်း သင်ခဲ့ရတဲ့သူဆိုတော့
သမိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ပြောမိရင်များ ဗမာမကောင်းကြောင်းက ပါလာတော့တာ.. ကျနော်ကလည်း ပြန်ပြောပါတယ်..
အေး.. ဟုတ်တယ်.. အရင်တုန်းကတော့ ဗမာတွေ မကောင်းဘူးလို့မင်းခံစားရမယ်.. ဒါပေမယ့် ဒါဟာ မင်းမသိ မမြင်ခဲ့ရတဲ့ ကာလတွေတုန်းက အကြောင်းတွေ မင်းကို ဘာမှ လာပြီး ဆိုးကျိုးပေးနေတာမှ မဟုတ်တာလို့ ... ငါတို့ဗမာတွေကိုလည်း ပေါ်တူဂီတွေရော ၊ မွန်ဂိုတွေရော ၊ ဂျပန်တွေရော ၊ အင်္ဂလိပ်တွေရော ငြင်းပမ်းနှိပ်စက် နိုင်စားသွားတာပဲ.. ငါတို့ဗမာတွေ ထိုင်းမှာ လာပြီး အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာက စစ်တိုက်နေတုန်း ခဏလေးရယ်.. သူတို့ တွေက ငါတို့ ကို နှိပ်စက်သွားတာများ ရာစုနှစ်ချီတယ်.. ကဲ.. မင်းအခု ရှိတဲ့ ဗမာတွေကို မေးကြည့်စမ်းပါ.. ဒီလူမျိုးတွေကို မုန်းသလားလို့ .. ဘယ်သူမှ မုန်းကြောင်း ပြောမနေဘူး.. ဒါဟာ ဘာလည်းဆိုတော့ ငါတို့ လူမျိုးက မင်းတို့ လူမျိုးထက် ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်.. သဘောထားကြီးတယ်... ဒါပဲ ငါပြောချင်တယ်လို့ .. လက်တွေ့ ကျတာ တစ်ခုပြောရရင်တော့ ဒီနေ့ မှာ ဗမာတွေ ထိုင်းတွေပေါ်မှာ မကောင်းတာကို ငါမတွေ့ ရဘူး.. ထိုင်းတွေက ဗမာတွေအပေါ်မှာ မကောင်းတာတွေကိုပဲ ငါတွေ့ နေရတယ်.. မင်း အသိဆုံးပဲ လို့ ....
Permalink Reply by May Kyaw Shin on July 20, 2010 at 5:54pm သိပ်မှန်တယ်ကိုဖြိုးေ၇ - တို.များ “ဗမာ” တိုင်းမှာ ကိုဖြိုး ပြောတဲ့အတိုင်း ရှင်းပြတတ်ဖို.လိုပါတယ် ။ တို.လည်း အဲဒီလိုပဲ ကြုံရင် ကြုံသလို
ရှင်းပြပေးနေရပါတယ် ။ အဓိက အနေနဲ.ကတော့ တို.ဗမာတွေရဲ့ “ သည်းခံ ခွင့်လွှတ်တင်္တတဲ့ စိတ်ဓါတ်” ကို ဖေါ်ထုတ်ပြရမယ်လေ ။
ဟိုခေတ် - ဟို စနစ်နဲ. ဟိုလူတွေ ပြုခဲ့သမျှကို ဒီခေတ် ဒီစနစ် ဒီခေတ်ကလူတွေနဲ.ရောပြစ်လို. မသင့်ဘူးဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ် ။
phyo said:May Kyaw Shin said:ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ (ကျောင်းတော်က ရန်စ - လို.ဆိုနိုင်တဲ့ ) အရုတ္တယနဲ.မြန်မာစစ် ရှိခဲ့ကြတာမို.ဗမာဆို အတော့်ကို မုန်းနေခဲ့ကြတာလေ ။ ဒါ့ကြောင့် ဟိုး --လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေ အချိန်တွေက “ဗမာ” လို. မပြောဝံ့ခဲ့ကြတာဖြစ်မှာပါ ။ ( အခုအချိန်အထိလည်း “ အရုတ္တယ ” မြို.ထဲ မှာ “ဗမာ” ဆို မုန်းနေကြဆဲ ဖြစ်နေပါတယ် ။ သူတို.မြို.တွေ - ဘုရားတွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့သူတွေတဲ့လေ ။ ကျမနဲ.နိးစပ်သူတွေကိုတော့ အတတ်
Permalink Reply by တိတိ on July 20, 2010 at 8:32pm ဟာ... မခိုင် လုပ်နေကြဖြစ်မယ်... သတိထားမှ :P
Khine said:ကိုယ့်အချင်းချင်းသိသွားရင် ပိုက်ဆံချေးမှာစိုးလို့နေမှာပေါ့..:P
Permalink Reply by htoo htoo on July 20, 2010 at 10:35pm မြန်မာမှန်းသိရင် အတင်းပြောမယ့်သူတွေ အဆင်သင့် ရှိတယ်လေ အဲတော့ အသိမခံရင် အတင်းပြော ခံရလွတ်တာပေါ့ 
4. "တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဦးဥတ္တမသာရ-၏ သြ၀ါဒ"
5. ***love poem collection<အချစ်ကဗျာ>***
7. အပျော်ရွှင်စေဆုံးစကားတစ်ခွန်း....by နိုင်းနိုင်းစနေ
8. မြန်မာ mp3သီချင်း တွေကို တစ်နေရာ တွင်းမှာ အလွယ်တကူ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရအောင်
11. နှုတ်ခမ်းအလှအတွက် နှုတ်ခမ်းနီဆိုးဆေးများနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်ပါတယ်။ (***** An alert for lipsticks containing lead *****)
13. မျိုးရိုး ဗီဇ ဆက်ခံခြင်း မိတ်ဆက်
14. စင်္ကပူရ နာမ..
17. (ဓမ္မပဒ)ပါဠိ၊မြန်မာပြန်၊အင်္ဂလိပ် အပိုင်း-၆
18. (ဓမ္မပဒ)ပါဠိ၊မြန်မာပြန်၊အင်္ဂလိပ် အပိုင်း-၅